घोषित पुरस्कार नपाएपछि नेपाल आइडल बुद्ध लामाको आक्रोश (भिडियोमा)
काठमाडौं । नेपाल आईडल विजेता बुद्ध लामाले घोषित पुरस्कार नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल आइडल विजेता लामाले घोषित पुरस्कार महिन्द्राको केयुभी १०० का नपाएको गुनासो गरेका हुन् । गत दशैमा सम्पन्न पहिलो नेपाल आइडल विजेता बुद्ध लामाले २० लाख रुपैयाँ नगद र महिन्द्राको केयुभी 100 गाडी पाएका थिए ।
साथै १५ लाख बराबरको भिडियो एल्बम र कन्ट्रयाक्ट पाएका थिए । उनले नगद २० लाख त पाए तर कार भने अझै नपाएको गुनासो गरेका छन् । पुरस्कार बापत दिईने भनेको गाडी आइडल कार्यक्रम आयोजकले अझैसम्म आफुलाई उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका हुन् ।
उनले एउटा अडियो सन्देशमार्फत कार नपाएको खुलाशा गरेका हुन् । जुन सन्देश सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भईरहेको छ । अडियोमा उनले भनेका छन्, ‘आठ महिना भैसक्यो धाउदा धाउदै कति दुख पाइसकें अझै कति धाउनु ? गाडी लैजाने हो भने ट्याक्स बापतको आठलाख रुपैयाँ लिएर आउनु गाडी लैजानु भन्छन र घरमा एक रुपैयाँ छैन मैले कहाबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा ? ल मेरो यो समस्या कसरि बाहिर ल्याउन सकिन्छ गरिदिनु पर्यो ।’